တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်ထား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်ထား
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် ရှီးကျားကျွမ်းမြို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ် နိုင်ငံတကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးပြပွဲ၌ smart mirror ခင်းကျင်းပြသနေသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီက၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်းကာလ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အစီအစဉ်တစ်ရပ်အား ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်က ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပင်မတန်ဖိုးအချိုးအစားကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ၊ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ယင်းပမာဏမှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က ၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစီအစဉ်အရ သိရသည်။
၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ တရုတ်နိုင်ငံသည် စက်မှုလုပ်ငန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးအား အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာသည်ကို စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပိုမို၍ အားလုံးပါဝင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီအစဉ်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အစီအစဉ်၌ ဒစ်ဂျစ်တယ် အခြေခံအဆောက်အအုံ သင့်မြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းမှု ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအပေါ် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးချဲ့ခြင်း အပါအဝင် နယ်ပယ် ၈ ခု၌ အဓိကတာဝန်များအား အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် 6G သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ပံ့ပိုးမှု၊ ဆားကစ်များ (circuits) ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ဉာဏ်ရည်တုစသဖြင့် မဟာဗျူဟာမြောက်နယ်ပယ်များတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးပုံစံသစ်များ၏ တိုးတက်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်း စသည်တို့၌ ခိုင်မာအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အချက်အလက်စီးဆင်းမှုများ၊ ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှု၊ တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိုင်မှုစနစ် ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ယွမ်နှင့် လုံခြုံရေးကာကွယ်မှု စသည့်နယ်ပယ်များ၌ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထူထောင်ရေး ချဲ့ထွင်သွားမည်ဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် အတွေ့ကြုံကို ဆွဲဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီအစဉ်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-01-13 00:44:15
BEIJING, Jan. 12 (Xinhua) — China’s State Council on Wednesday rolled outaplan to facilitate the development of the digital economy in the 14th Five-Year Plan period (2021-2025).
The country will also explore the establishment of regulations in the fields of cross-border data flows, market access, anti-monopoly work, the digital yuan and privacy protection in the digital era, drawing on international rules and experience, per the plan. ■
Photo : A staff member displaysasmart mirror at the China International Digital Economy Expo 2021 in Shijiazhuang, north China’s Hebei Province, Sept. 7, 2021. (Xinhua/Wang Xiao)